အသကျမသခေငျ မဲပေးခဲ့သူတဈဦးရဲ့ ရငျနငျ့ဖှယျဇာတျလမျးအကွာငျးပွောပွလာတဲ့ အစီအစဉျတငျဆကျသူ မောငျမောငျအေး !! – Cele Top Stars
အသကျမသခေငျ မဲပေးခဲ့သူတဈဦးရဲ့ ရငျနငျ့ဖှယျဇာတျလမျးအကွာငျးပွောပွလာတဲ့ အစီအစဉျတငျဆကျသူ မောငျမောငျအေး !!
November 10, 2020 By admin Celebrity
အသကျမသခေငျ မဲပေးခဲ့သူတဈဦးရဲ့ ရငျနငျ့ဖှယျဇာတျလမျးအကွာငျးပွောပွလာတဲ့ အစီအစဉျတငျဆကျသူ မောငျမောငျအေး
အစီစဉျတငျဆကျသူ ကိုမောငျမောငျအေးက ဒီနမေ့နကျပိုငျးမှာ ရငျနငျ့ဖှယျဇာတျလမျးလေးတဈပုဒျ အကွောငျး ကိုပွနျပွောငျးပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီဖွဈရပျလေးကတော့ မငျးကငျးမွို့နယျမှာဖွဈပကျြခဲ့တာ ဖွဈပွီး မငျးကငျး မွို့နယျ NLD လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး တဈဦးက တငျထားကို ကိုမောငျမောငျအေးက ပွနျလညျ မြှ ဝပေေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော။
မငျးကငျးမွို့နယျက ကငျဆာရောဂါဝဒေနာကို ခံစားနရေပွီး ရောဂါသညျးလာခဲ့တဲ့ မဝဝေလေငျးက “အမစေုကို သမီးခဈြတယျ၊ သမီး မသခေငျ မဲပေးသှားပါရစေ” ဆိုပွီး မိဘတှကေို အမွဲတောငျးဆိုနခေဲ့တဲ့အတှကျ မိဘမြား က မဝဝေလေငျးစိတျခမျြးသာမှု ရအောငျ ဆောငျရှကျပေးခဲ့ကွတာပဲဖွဈပါတယျ။
မဝဝေလေငျးဟာ အသကျ၂၃နှဈအရှယျသာ ရှိသေးပွီး မငျးကငျးမွို့နယျကြောကျအိုးကြေးရှာမှာ နထေိုငျနသေူ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ မိဘမြားဟာ မဝဝေလေငျး မဲပေးခှငျ့ရအောငျ ကြေးရှာကျောမရှငျကိုပွောပေးခဲ့ပါတယျနျော။နိုဝငျဘာ ၇ရကျနကေ့ ကွိုတငျမဲလာယူခဲ့တဲ့အတှကျ မဝဝေလေငျးဟာ မဲပေးခှငျ့ကို ရသှားခဲ့ပါတယျ။ နိုဝငျဘာ ၈ရကျနမှေ့ာတော့ မဝဝေလေငျးဟာရောဂါပိုသညျးလာခဲ့ပွီး ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။
မကှယျလှနျခငျမှာ မဝဝေလေငျးတမေးတညျးမေးနခေဲ့တာကတော့ “အမစေု နိုငျတယျမို့လား”လို့ မေးသှားခဲ့ တယျလို့လညျး လှတျတျောကိုယျစားလှယျကရေးသား အသိပေးခဲ့တာပါနျော။ဒါကွောငျ့မဝဝေလေငျးကို ဂုဏျပွုပါ ကွောငျးနဲ့ နာရေးအတှကျ ကူညီမှုအခြို့ကိုလညျး ပွုလုပျပေးခဲ့တယျလို့ မငျးကငျးမွို့နယျ NLD ပွညျသူ့ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး ဒေါကျတာကြျောလငျးက အသိပေးထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီလို ဒေါကျတာကြျောလငျး အသိပေးထားတာကို အစီစဉျတငျဆကျသူ ကိုမောငျမောငျအေးက ပွနျပွီးဝမြှေ ထားတာဖွဈပွီး “အမစေု နိုငျခဲ့တယျ ညီမလေး၊ နိုငျတာမှ အပွတျအသတျနဲ့ ကှဲကှဲပွားပွားကို အနိုငျရခဲ့ပါတယျ။ဝဝေလေငျးတဈယောကျ ကောငျးရာသုကတိ ရောကျပါစေ။ နောငျလာနောငျသားတှအေတှကျ စဈမှနျတဲ့ ဒီမိုကရစေီ အသီးအပှငျ့ကို ရရှိအောငျညီမလေး ဝဝေလေငျးရဲ့ မဲတပွားနဲ့ ထောကျကူပေးခဲ့မှုအပျေါ ကြေးဇူးတငျရငျး….ဆိုပွီးရေးသားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျနျော။
ကိုမောငျမောငျအေးဟာ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီကို အငျတိုကျအားတိုကျ ထောကျခံခဲ့သူဖွဈကာ မဲပေးကွတဲ့နမေဲ့ရုံတှမှော တာဝနျယူပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမတှကေိုလညျး အထူးပဲ ကြေးဇူးတငျစကား တှေ ပွောခဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။
“တကယျတော့ ဆရာမတို့ / ဆရာတို့ / မဲရုံမှာရှိပေးနသေူတိုငျးဟာ မဲရုံတှမှောတာဝနျယူပေးခဲ့တာမဟုတျပါဘူး…ဘယျအခြိနျ ဘယျမဲရုံနရောမှာ ဗုံးလနျ့မလဲဆိုတာကို စိုးတထိတျထိတျနဲ့ ( ဒီလောကျသတငျးတှထှေကျနေ / သကျသနေဲ့တကှ ဖမျးမိနခေဲ့တာတောငျမှ ) မဲထညျ့ပွညျသူတှတေောငျ အခြိနျပိုငျးလေးသာ မဲရုံတှမှော ရှိခဲ့ကွပမေဲ့ ဆရာ/ဆရာမတို့ဟာ မနကျ ၅ နာရီကနေ ည မိုးခြုပျထိ အခြိနျပွညျ့နပေေးခဲ့ကွရငျး တိုငျးပွညျ အတှကျ အသကျနဲ့ရငျးပွီး ပေးဆပျခဲ့ကွသူတှပေါ….
တာဝနျကတြောထကျ အပွနျသနျးပေါငျးမြားစှာ ပိုပါတယျ…၂၀၂၀ မွနျမာ့သမိုငျးရဲ့တနျဖိုးဖွတျမရသူတှထေဲမှာ ကိုဗဈကာလတလြှောကျက ဆရာဝနျ – ကနျြးမာရေးဝနျထမျး နဲ့ ဗျောလနျတီယာတှရေယျ အခု မဲရုံတိုငျးမှာရှိနခေဲ့တဲ့ ဆရာ/ဆရာမတှေ တယောကျမကနျြကိုတော့ ကြှနျတျောတို့ပွညျသူတှရေဲ့သူရဲကောငျးစဈစဈတှလေို့ ရာသကျပနျမျောကှနျးတငျလိုကျပါတယျ..ရငျထဲအသညျးထဲကနေ လှိုကျလှဲစှာ ကြေးဇူးတငျဂါရဝပွုလကျြ” ဆိုပွီးလညျး ရေးသားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျပရိတျသတျကွီးတို့ရေ။
အဆုံးထိဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိတျသတျကွီးလဲ သာယာတဲ့ နတေ့ဈနကေိူ့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစနေျော။
အသက်မသေခင် မဲပေးခဲ့သူတစ်ဦးရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်ဇာတ်လမ်းအကြာင်းပြောပြလာတဲ့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ မောင်မောင်အေး
အစီစဉ်တင်ဆက်သူ ကိုမောင်မောင်အေးက ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ ရင်နင့်ဖွယ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် အကြောင်း ကိုပြန်ပြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်လေးကတော့ မင်းကင်းမြို့နယ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မင်းကင်း မြို့နယ် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးက တင်ထားကို ကိုမောင်မောင်အေးက ပြန်လည် မျှ ဝေပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
မင်းကင်းမြို့နယ်က ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာကို ခံစားနေရပြီး ရောဂါသည်းလာခဲ့တဲ့ မဝေဝေလင်းက “အမေစုကို သမီးချစ်တယ်၊ သမီး မသေခင် မဲပေးသွားပါရစေ” ဆိုပြီး မိဘတွေကို အမြဲတောင်းဆိုနေခဲ့တဲ့အတွက် မိဘများ က မဝေဝေလင်းစိတ်ချမ်းသာမှု ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မဝေဝေလင်းဟာ အသက်၂၃နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးပြီး မင်းကင်းမြို့နယ်ကျောက်အိုးကျေးရွာမှာ နေထိုင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ မိဘများဟာ မဝေဝေလင်း မဲပေးခွင့်ရအောင် ကျေးရွာကော်မရှင်ကိုပြောပေးခဲ့ပါတယ်နော်။နိုဝင်ဘာ ၇ရက်နေ့က ကြိုတင်မဲလာယူခဲ့တဲ့အတွက် မဝေဝေလင်းဟာ မဲပေးခွင့်ကို ရသွားခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၈ရက်နေ့မှာတော့ မဝေဝေလင်းဟာရောဂါပိုသည်းလာခဲ့ပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
မကွယ်လွန်ခင်မှာ မဝေဝေလင်းတမေးတည်းမေးနေခဲ့တာကတော့ “အမေစု နိုင်တယ်မို့လား”လို့ မေးသွားခဲ့ တယ်လို့လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကရေးသား အသိပေးခဲ့တာပါနော်။ဒါကြောင့်မဝေဝေလင်းကို ဂုဏ်ပြုပါ ကြောင်းနဲ့ နာရေးအတွက် ကူညီမှုအချို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ မင်းကင်းမြို့နယ် NLD ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာကျော်လင်းက အသိပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ဒေါက်တာကျော်လင်း အသိပေးထားတာကို အစီစဉ်တင်ဆက်သူ ကိုမောင်မောင်အေးက ပြန်ပြီးဝေမျှ ထားတာဖြစ်ပြီး “အမေစု နိုင်ခဲ့တယ် ညီမလေး၊ နိုင်တာမှ အပြတ်အသတ်နဲ့ ကွဲကွဲပြားပြားကို အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဝေဝေလင်းတစ်ယောက် ကောင်းရာသုကတိ ရောက်ပါစေ။ နောင်လာနောင်သားတွေအတွက် စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသီးအပွင့်ကို ရရှိအောင်ညီမလေး ဝေဝေလင်းရဲ့ မဲတပြားနဲ့ ထောက်ကူပေးခဲ့မှုအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရင်း….ဆိုပြီးရေးသားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ကိုမောင်မောင်အေးဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကို အင်တိုက်အားတိုက် ထောက်ခံခဲ့သူဖြစ်ကာ မဲပေးကြတဲ့နေ့မဲရုံတွေမှာ တာဝန်ယူပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမတွေကိုလည်း အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်စကား တွေ ပြောခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
“တကယ်တော့ ဆရာမတို့ / ဆရာတို့ / မဲရုံမှာရှိပေးနေသူတိုင်းဟာ မဲရုံတွေမှာတာဝန်ယူပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး…ဘယ်အချိန် ဘယ်မဲရုံနေရာမှာ ဗုံးလန့်မလဲဆိုတာကို စိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့ ( ဒီလောက်သတင်းတွေထွက်နေ / သက်သေနဲ့တကွ ဖမ်းမိနေခဲ့တာတောင်မှ ) မဲထည့်ပြည်သူတွေတောင် အချိန်ပိုင်းလေးသာ မဲရုံတွေမှာ ရှိခဲ့ကြပေမဲ့ ဆရာ/ဆရာမတို့ဟာ မနက် ၅ နာရီကနေ ည မိုးချုပ်ထိ အချိန်ပြည့်နေပေးခဲ့ကြရင်း တိုင်းပြည် အတွက် အသက်နဲ့ရင်းပြီး ပေးဆပ်ခဲ့ကြသူတွေပါ….
တာဝန်ကျေတာထက် အပြန်သန်းပေါင်းများစွာ ပိုပါတယ်…၂၀၂၀ မြန်မာ့သမိုင်းရဲ့တန်ဖိုးဖြတ်မရသူတွေထဲမှာ ကိုဗစ်ကာလတလျှောက်က ဆရာဝန် – ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း နဲ့ ဗော်လန်တီယာတွေရယ် အခု မဲရုံတိုင်းမှာရှိနေခဲ့တဲ့ ဆရာ/ဆရာမတွေ တယောက်မကျန်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့သူရဲကောင်းစစ်စစ်တွေလို့ ရာသက်ပန်မော်ကွန်းတင်လိုက်ပါတယ်..ရင်ထဲအသည်းထဲကနေ လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ဂါရဝပြုလျက်” ဆိုပြီးလည်း ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ။
အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ သာယာတဲ့ နေ့တစ်နေ့ကိူ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်။
ဒျေါသကျသကျခိုငျနဲ့ပတျသကျပွီး လှောငျပွောငျတိုကျခိုကျမှုတှကေို ဂရုမစိုကျဘဲ ပြျောပြျောပဲနနေတေဲ့ ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျ
ထီဖှငျ့ပွီး ရကျအတျောကွာမှ သိနျးထီဆုပေါကျကွောငျး သိခှငျ့ရခဲ့တဲ့ မကေဗြာ !!